Daawo: Gabadh Australia u dhalatay oo Lagu Qasbay in ay ka tagto Xeeb dalka Faransiiska Ku taala (Maxaa dhacay ?) - Hablaha Media Network
Daawo: Gabadh Australia u dhalatay oo Lagu Qasbay in ay ka tagto Xeeb dalka Faransiiska Ku taala (Maxaa dhacay ?)
HMN:- Gabadh Muslim ah oo Australia ka timid ayaa ka warantay sidii loogu qasbay in ay ka tagto xeeb ku taalla Faransiiska sababtuna ay ahayd in ay qabtay dhar asturan.
Zeynab Alshelh oo 23 jir ah baratana dhakhtarnimo ayaa warbaahinta Australia u sheegtay in ay safarkeeda Yurub ay uga gol lahayd in ay ku garab istaagto gabdhaha Muslimiinta ah ee qaaradaas ku nool.
Muuqaal laga sii daayay Channel 7 ayaa muujinaya dad Faransiis ah oo gabadhan u sheegaya in ay isaga tagto xeebta haddii kale ay u wici doonaan booliiska.
Maxkamadda sare ee dalka Faransiiska ayaa meesha ka saartay sharciyadii mamnuucayay in dumarku ay ku dabaalan karaan xeebaha iyaga oo asturan.
Dhawr magaalo ayaa markii hore keenay sharcigaas iyaga oo sheegay in dharka asturaada ah ee lagu dabaasho ay astaan u tahay Islaamka ayna kicisay dareenka dadweynahatan iyo wixii ka dambeeyay falkii argagixiso ee bishii lixaad ka dhacay magaalada Nice ee dalka Faransiiska.
Alshelh ayaa sheegtay in iyada iyo qoyskeedu ay u safreen si ay wax badan uga soo ogaadan xaaladda ayna fiiriyaan bal wixii ay ka qaban karaan.
Muuqaalkan Channel 7 laga baahiyay Axaddii ayaa muujinaya nin ugu goodinaya in ay xeebta ka tagto haddii kale uu booliiska u yeeri doono, intaasna waxaa sii dheeraa dadka oo xeebta jooga oo u miidaaraya ama u sheegaya in aysan raali ka ahayn in ay xeebta joogto.